cheat စက် Is — Steemit
cheat စက် Is
ကွာရှင်းရှေ့နေ: Facebook ကိုတစ်ဦး
Beyonce, Blue Ivy ဒါ့အပြင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပစ်မှတ်စျေးဝယ် network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ခံစားကြည့်ပါ
Los Angeles, CA - ဖေဖော်ဝါရီ 18: Beyonce နဲ့အပြာရောင်အိုင်ဗီ Carter ကအဆိုပါ 67 NBA အားလုံး-စတားဂိမ်းတက်ရောက်ရန်: ရေးအဖွဲ့ LeBron ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ Los Angeles မှာဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2018 ရက်တွင် Staples Center, ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရေးအဖွဲ့စတီဖင်။ (Allen က Berezovsky / Getty Images အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ)
သွေးခုန်နှုန်းနိုက်ကလပ်သေနတ်သမားရဲ့ခမညျးတျောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာတစ်ခု FBI ကတျသတငျး Allegedly ခဲ့
Orlando တွင်, Fla အတွက်လိင်တူချစ်သူကလပ်မှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းသေနတ်သမားအဖြစ်ဖော်ထုတ်အိုမာ Mateen တစ်ခု undated ဓါတ်ပုံ, ။ , ဇွန်လ 12, 2016 ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Tiffany Haddish ရဲ့ Beyonce နှင့်အတူသူမ၏ချစ်ကြည်ရေးတစ်စုံတစ်ယောက်က Bit Beyonce ရဲ့မျက်နှာပြီးနောက်ခဲ့ Says
8 အရာ ER ဆရာဝန်များသူတို့၏နေအိမ်များတွင်ရှိဖို့ငြင်းဆန်
Lisa Lombardi / HEALTH.COM မတ်လ 8, 2016 by
ပိုပြီးအဘို့, TIME ကကနျြးမာရေးသွားရောက်ကြည့်ရှု။
အဘယ်အရာကိုထုတ်ကုန်သူတို့နေအိမ်များနှင့်ကိုက်မှသူတို့ကိုတားမြစ်နိုင်အောင်အန္တရာယ်ရှိသောထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး: အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာဆေးသမားကျွန်တော်တို့ကိုတွေးမိဖန်ဆင်းသော grisly ပစ္စည်းပစ္စယ, အမျိုးမျိုးတို့ကိုတွေ့မြင်? ဤတွင်ထိုအမတော်တဆမှုရှေ့တွင်သဘောထားပြင်းထန်ဆုံးသောတွှေသောနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။
"ကျနော်တို့ကအလေးအနက် trampoline ဒဏ်ရာ ... အထက်-ခန္ဓာကိုယ်အရိုးကျိုး, ကျိုးကျပေါငျရိုး, လည်ပင်းဒဏ်ရာတွေအများကြီးကိုကြည့်ပါ။ ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အများဆုံး ER ဆရာဝန်များက၎င်းတို့၏လေးတွေများအတွက် trampolines မဝယ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခပါပဲ။ ကောင်းသောအရာမကြင်နာရှိပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာမိဘများအာမခံ၏မှားယွင်းသောအသိ get; တစ်ခုခုတဝိုက်ပိုက်ကွန်ရှိပါတယ်သောအခါသူတို့ကလေးတွေအန္တရာယ်ကင်းပါလိမ့်မည်ထင်။ "- Ferdinando Mirarchi, MD Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှ Medical Center မှအရေးပေါ်ဆေးပညာဦးစီးဌာန၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး
"Button ကိုဘက်ထရီကားကိုဝေးလံခေါင်သီခြင်းနှင့်ခရီးဆောင်နဲ့ LED မီးလုံးထဲမှာ ပို. ပို. အဖြစ်များကြသည်ဒါပေမဲ့သူတို့ငယ်ရွယ်ကလေးတွေကိုဖို့အလွန်အမင်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ တောက်ပတ္ထုများကဲ့သို့ကလေးငယ်များ၏သေနတ်နှင့်သူတို့ကိုသုံးစွဲပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအန္တရာယ်သူတို့ကအစာပြွန်ထဲမှာညပ်ရနိုင်သည်။ အကြွေစေ့မှီဝဲရရှိသောအခါ, မကြာခဏ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဖြတ်သန်းပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦး button ကိုဘက်ထရီမှီဝဲရရှိသောအခါ, ဘက်ထရီအက်ဆစ်ရာသက်ပန်မသန်မစွမ်းဖြစ်စေတဲ့, အစာပြွန်၏အုတ်ရိုးကိုစားနိုင်ပါတယ်။ "- ဒါဝိဒ်သည်ဂျေ Mathison, MD ကလေးအရေးပေါ်ခန်းဆရာဝန်နှင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အတ္တလန္တိတ်ဒေသဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး pm တွင်ကလေးအထူးကု
VideoCOMING UP Play ...
"ကံမကောင်းစွာသည်နွေရာသီကျွန်တော်တစ်ဦးရေကူးကန်ထဲသို့ကျမတော်တဆ-ရေကူးခြင်းနှင့်ရေနစ်နိုင်သူလေးတွေ-ပင်သူမြားကိုကွညျ့ပါ။ ငါ့အဘို့, ကအစဉ်အဆက်ငါ့အိမျမှာတဦးတည်းလိုမှငါ့ကိုတားဆီးထားကြောင်း, မကြာခဏတိတ်တဆိတ်ရေနစ်သေဆုံးဒီတော့အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်တယ်, ။ ငါ့သားသမီးအားလုံးသုံးရေကူးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့ရေကန်မှသူတို့ကိုယူ, ဒါပေမယ့်ငါနောက်ကွယ်မှကြောင့်အန္တရာယ်ကျန်ရစ်ပြီ။ "-Dara Kass, MD NYU မှာအရေးပေါ်ဆေးပညာ၏ရော်နယ်အောင်နိုင် O. Perelman သညျဌာနလက်ထောက်ပါမောက္ခနေထိုင်ကွောငျးသိရ Langone Medical Center မှာ
Power ကအဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့် extension ကိုလှေကား
ပါဝါကိုအဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့် Extension ကိုလှေကား: "ငါလှည့်ပတ်ကိုစောင့်ရှောက်ကြပါဘူးနှစ်ခုပစ္စည်းများရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့မကြာခဏလေးနက်နှင့်ကျယ်ပြန့်ဒဏ်ရာရမှုအရာမြင့်မားတဲ့လှေကားများ၏ချွတ်လဲသေကြပြီသူတွေကို, (ဦးခေါင်းစိတ်ဒဏ်ရာ, အဆုတ်ပြိုကျ) ဆက်ဆံပါ။ ငါပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်ထိုအံ့သြစရာအရာတခုပါဝါအဝတ်လျှော်သည်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပြင်းထန်သောကိုရေစီးကနေဒဏ်ရာသို့မဟုတ် lacerations မထိုးဖောက်အတူတက်အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ "-Seth Podolsky, MD Cleveland ဆေးခန်းအရေးပေါ်ဆေးပညာအင်စတီကျု၏ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်
, မေီ Baxter, MD - "ငါသဘောတရားလိုလားသူသေနတ်ဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့လွတ်လပ်သည့်လစ်ဘရယ်ဝါဒပေါ့, ဒါပေမယ့်ငါတောင်ငါ့အလေးတွေငါသေနတ်ရှိတယ်ကိုသိရှိရာအိမ်များမှမလွှတ်ဘဲရန်လုံလောက်သောဆယ်ကျော်သက်သတ်သေနှင့်မတော်တဆကလေးဘဝသေဆုံးမှု၏စောင့်ရှောက်မှုယူပါတယ်။ " အတ္တလန်တာအတွက်စကော့တလန် RITES ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာကလေးအထူးကုအရေးပေါ်ဆရာဝန်
သံလိုက်လှိုင်းများလာသောအခါ "Ramen ခေါက်ဆွဲခေါက်ဆွဲ, ဒါမှမဟုတ်စတိုင်ရိုဖောင်းကွန်တိန်နာအလားတူဟင်းချို, အလွန်ပူရ။ ဒါဟာထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကငါတွေ့မြင်မွေးကင်းစအတွက်မီးလောင်ဒဏ်ရာအပူလောင်၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းမရှိပါပဲ။ မိဘများသည်တစ်ဦး handsy ကလေးငယ်အားဖြင့်ပယ်ဆွဲခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသူတို့ကကောင်တာပေါ်မှာဆိုရင်လာသောအခါထိုအများမှာမည်မျှပူမေ့လျော့။ "- ဒါဝိဒ်သည်ဂျေ Mathison, MD